DataNumen: Momba DataNumen
Naorina in 2001, DataNumen, Inc. dia ekena ho mpitarika manerantany amin'ny teknolojia fanarenana data. Namidinay ny rindrambaiko fanarenana angon-drakitra nahazo loka tany amin'ny firenena 130 mahery sy amin'ireo orinasa lehibe indrindra manerantany, anisan'izany ny AT&T Global Network Services, General Electric Co., IBM, HP, Dell Inc., Motorola Inc., The Procter & Gamble Co., FedEx Corp., Xerox Corp., Toyota Motor Corp. ary maro hafa.
Manome izany koa izahay kit fampandrosoana ny rindrambaiko (SDK) ho an'ny mpamorona hahafahan'izy ireo mampiditra ny teknolojia fanarenana data tsy manam-paharoa amin'ny lozisialy tsy misy tohiny.
Ny iraka ifotoran'ny DataNumen, Inc. dia ny famerenana angon-drakitra betsaka avy amin'ny voina data tsy nahy araka izay tratra. Miaraka amin'ny haitao avo lenta, manandrana mitady vahaolana mety indrindra ho an'ny mpanjifanay izahay ary mampihena ny fatiantoka amin'ny kolikoly tahirin-kevitra noho ny antony maro samihafa, toy ny tsy fahombiazan'ny fitaovana, ny tsy fetezan'ny olombelona, ​​ny viriosy na ny fanafihana hacker.
DataNumen, Inc. dia andiana ekipa matihanina fanarenana angon-drakitra manana fahaizana manokana isan-karazany. Ekipa tanora izahay manana hevitra vaovao natokana hamokarana ny rindrambaiko fanarenana angona tena tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao.
26 / F., Tilikambon'ny vondrona kanto
Suite 791, 77 Connected Road
Eoropa DataNumen, Inc.
Kianja 1 an'ny Trafalgar, Suite 290
Amerika Avaratra DataNumen, Inc.
Wilmington, DE, 19808-6192, Etazonia